အလွန်အမင်းကာကွယ်ပေးသော မိခင်တွေရဲ့အမူအကျင့် (၈)ခု - Chit MayMay
Home Parenting အလွန်အမင်းကာကွယ်ပေးသော မိခင်တွေရဲ့အမူအကျင့် (၈)ခု
မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအရာကိုသာ လိုချင်ကြသော်လည်း ကျွန်မတို့ ကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့အရာတွေက သူတို့ကို နာကျင်မှုနဲ့ အဆုံးသတ်စေတဲ့ အချိန်တွေရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်ကလေးတွေကို သူတို့ဘဝသူတို့ မထိန်းချုပ်နိုင်အောင် အသိမဲ့စွာ တားဆီးတတ်ကြတဲ့ overprotective မိဘတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုမိဘတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်များ ရရှိခြင်းကနေ အတားအဆီးဖြစ်စေပါတယ်။
မေမေတို့ကော ကိုယ့်ကိုယ်ကို overprotective mom တစ်ယောက်လို့ စဉ်းစားမိဖူးသလား? မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်က ကလေးတွေကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင််မှုရှိခြင်းကနေ တားဆီးခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းပေါ်မှာပဲ အာရုံမစိုက်သင့်ပါဘူး။ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့အတွက် သူတို့အား လက်နက်ကိရိယာတွေပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ကို လွတ်လပ်ပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့လူဖြစ်အောင် ကူညီပေးမယ့် ကိရိယာတွေဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ကလေးရဲ့ ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားခြင်း
အခက်အခဲတွေပေါ်လာတဲ့အခါ overprotective မိခင်တွေက ချက်ချင်းပဲထိန်းချုပ်လိုကြပါတယ်။ ဘယ်အဆင်မပြေမှုမျိုးကိုမဆို ကလေးတွေ မတွေ့ကြုံရလေအောင် ကာကွယ်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ အဆင်မပြေမှုတွေကို ဘယ်သောအခါမှ ကြုံတွေ့ရခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို သည်းခံနိုင်စွမ်း ဖွံ့ဖြိုးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။
၂။ ကလေးတွေရဲ့ကျောင်းနဲ့ အလွန်အကျွံ အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်း
သူတို့ကလေးတွေကို သူတို့ဘာသာ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကို သင်ပေးမယ့်အစား third parties ကနေ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာရင် overprotective မိဘတွေဟာ ၎င်းတို့ကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဆရာတွေဆီ တိုက်ရိုက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ပြဿနာက ဘယ်လောက်ပဲ အသေးအမွှားဖြစ်ပါစေ၊ သူတို့က ကလေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အကူအညီ ချက်ချင်းရှာတတ်ကြပါတယ်။
၃။ အရာရာတိုင်းမှာ သူတို့ကလေးတွေ အောင်မြင်မှု ရရှိစေဖို့ ဘယ်အရာမဆို လုပ်ဆောင်ခြင်း
လူသားတွေဟာ အမှားနဲ့ စိတ်ပျက်ခြင်းမှတဆင့် သင်ခန်းစာ ထောင်ပေါင်းများစွာကို သင်ယူကြပါတယ်။ Overprotective မိဘတွေရှိတဲ့ ကလေးတွေကတော့ အသစ်သောအရာတွေကို လေ့လာခွင့်ပြုတဲ့ activities တွေမှာ ပါဝင်ခွင့်မရကြပါဘူး။ သေချာတာပေါ့ ။ သူတို့မှာ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးက ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေ စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး မရှိပါဘူး။
၄။ သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတဲ့အခါ အရမ်းအထက်စီးဆန်ခြင်း
ကလေးတွေဟာ သူတို့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ဖော်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်းနှင့် အကူအညီမဲ့ခြင်းကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာ သင်ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ အရာအားလုံးကို လုပ်ပေးမယ့်အစား စိန်ခေါ်မှုတွေကို လက်ခံပြီး ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ကူညီပေးရပါမယ်။
၅။ ကလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းရင်းနှီးမှုကို ထိန်းချုပ်တတ်ခြင်း
ကလေးဘဝနဲ့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာ ကလေးတွေနဲ့အတူ နေထိုင်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အပြုအမှုပေါ်မှာ များစွာလွှမ်းမိုးပါတယ်။ Overprotective မိခင်တွေက သူတို့ကလေးတွေကို တခြားသူတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းကနေ တားဆီးဖို့ ကြိုးစားတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေအနေနဲ့ ဘယ်သူက ကောင်းတယ်၊ ဘယ်သူက မကောင်းဘူးလဲ ဆိုတာကို သူတို့ဘာသာ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျန်းမာသော လူမှု့ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကို လေ့လာခြင်းက လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ဖွံ့ဖြိုးရမယ့် ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၆။ သူတို့က ကလေးရဲ့ကမ္ဘာကို ဆက်တိုက်ကျူးကျော်တတ်ကြပါတယ်
ကလေးတွေအနေနဲ့ အမြဲတမ်း သတိဆွဲနေရတာ၊ နိုးနိုးကြားကြားရှိနေရခြင်းက Unhealthy ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိဘတစ်ယောက်ဟာ ကလေးရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ဂရုစိုက်သင့်သော်လည်း ကန့်သတ်ချက်ကို ဖြတ်ကျော်ခြင်းက အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ ကလေးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို စတင်ဖို့ privacy ကိုတောင်းဆိုလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါက လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ရင့်ကျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Overprotective မိဘတွေဟာ ဒီကန့်သတ်မှုတွေ မလေးစားတတ်သလို ကလေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်အခွင့်အရေးကိုလည်း မလေးစားတတ်ကြပါဘူး။
၇။ အိမ်မှာ တာဝန်ဝတ္တရား (သို့) အိမ်မှုကိစ္စကို ခွဲဝေပေးတာမျိုး မရှိပါဘူး
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ မိသားစုဝင်ဆိုတဲ့သဘောကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းပေါ်မှာ တည်ဆောက်ပါတယ်။ အလွန်အမင်းကာကွယ်ခံရတဲ့ ကလေးတွေဟာ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်း (သို့) လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အထောက်အကူပြုခြင်း သဘောတရားကို နားမလည်ကြပါဘူး။
ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေ၊ အတွေးတွေနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေက လူတိုင်းအတွက် ဦးစားပေးဖြစ်သင့်တယ်လို့ ယုံကြည်လာကြပါတယ်။
၈။ သူတို့က စစ်မှန်တဲ့ လောကသဘာဝကို ဖုံးကွယ်ထားပါတယ်
လူကြီးတွေအနေနဲ့ လောကကြီးဟာ မတရားမှု၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ အခြေအနေတွေနဲ့ ပြည့်နေကြောင်း သိထားကြပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ဒီအန္တရာယ်တွေ ရှိကြောင်းကိုလည်း သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့က အန္တရာယ်တွေကို ကျော်လွှားဖို့လည်း အဆင့်သင်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
overprotective မိခင်တွေရဲ့လက္ခဏာတွေ မေမေတို့မှာကော ဘယ်လောက်များများရှိနေပြီလဲ? မေမေတို့က ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်လိုရင် ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေကို သူတို့ဘာသာ ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးထားရပါမယ်။ သူတို့လိုအပ်သမျှကို ကူညီပေးဖို့က သူတို့နားမှာ မေမေတို့ အမြဲမရှိနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကို လွတ်လပ်ပြီး ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ လူကြီးတွေ ဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးပါ။
Previous articleပိုပျော်ရွှင်ရသော ပိုကောင်းသော မေမေတို့ဖြစ်စေဖို့ မေမေတို့အတွက် Challenge (၈) ခု
Next articleကလေးရဲ့ဉာဏ်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် ကစားနည်း (၇)မျိုး
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနှင့် သမီးနှင့် သားကို အကျိုးသက်ရောက်ပုံ
နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါ ကိုယ့်အတတ်နှင့် ကိုယ်စူးသလို ကြုံလာရနိုင်တဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအမှား (၆)ခု